SENTAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA » Dabeyl in 2017
DIRAA Blog Africa.
December 26, 2017 Jamie JamiesonDIRAA Africa News
Storm dajiyey guryaha iyo luxay saqafka dugsiga degaanka ah:
Waxaa jiray duufaan weyn oo ay weheliyaan xeebta u gudubno, November this (2017) oo halakeeyey guryo badan oo wada dooxay saqafka off ah blocks fasalka dugsiga hoose.
The SENTAFrica Wakiilka Malawi, Yunus Banda, ayaa lagu casuumay in ay dugsiga si ay u arkaan burburka inuu nafsaddiisa. dhaawac duufaan ayaa lagu kuma koobna in ay dugsiga. wuxuu qorayaa:
“Waxaa kacay duufaan culus fiidkii la soo dhaafay ayaa la afuufi off Saanqaag Fidlo ah iyo waxa daasadda at Thugulu School. Laba blocks dugsiga saameeyeen. Iyo bulshada. U dhaw 11 guryaha gebi ahaanba hoos halka u dhow 21 guryaha ayaa Darbiyadeedii Rujiyo by dabaysha.”
Sida uu waraystay dhibaatada ay keento dabeylo uu kaliya la fududayn karin dhibanayaasha salaadda iyo dhiirigelin.
SENTAFrica taageertaa koritaanka isku-iyo isku filnaashaha, dadka yididiilo leh in la helo xal u ah dhibaatooyinka joogtada ah naftooda. Si kastaba ha ahaatee, markay ku Dhaedo Musiibo dila kuwa u baahan taageero dheeraad ah sida ugu xun ay dhibaatadu saameysey.
SENTAfrica si degdeg ah u soo diray hadiyad ahaan u awood Livingway Education wax looga qabto dhibaatooyinka ka. Agaasimaha LWE Yunusu Banda soo ururay koox oo ay ku jiraan sare sare iyo tuulada madaxa-nin. Kulanka ayaa go'aansaday on hab wax qabad oo keeni lahaa in gargaar la siiyo si ay u 116 qoysas, laba dugsi iyo siddeed iyo kaniisadaha.
1-dii December kulan ka mid ah wakiilo ka socda degaanka la kulmay on site LWE in la qaybiyo baakadaha taageerada. Khudbado la sameeyey by dugsiyada iyo wakiilada kaniisadda, wakiil ka ah group-faa'iideystayaasha iyo saraakiisha dawladda hoose. Laba madaxdii sare oo ay awoodaan si ay u guddoomin badan dacwadda.
Xiriiriyaha gargaarka degdegga ah Golaha Deegaanka sharxayaa aragtida Golaha Deegaanka
Dugsiyada’ cinwaanada wakiilka kooxda
GVH Khwidzi hadlaya shirkii
Kooxdani waxa ay ku faraxsan yihiin inay la gurigaaga hadda, iyadoo hadiyad yar oo ka jira SENTAfrica.
Dad badan oo lagu caawiyay yar laakiin weli waxaa jira wax badan in la sameeyo. Waayo, qaar badan ma ahayn oo keliya guryaha la jiray ee burburay. duufaanka waxyeello dalagga ee beeraha dad badan ayaa, dumin geedaha iyo keenaya dhibaato dheeraad ah. Waxay qaadan doontaa saacado badan ee shaqo adag in lagu kabo dhaawac iyo beeraan dalagyo ay lagama maarmaan u ah badbaadada bulshada.
Geedaha lagu tuuray duufaan November
Waa maxay SENTAfrica waxa ay awood u sameeyaan waa in ay muujiyaan bulshada in ay dan iyadoo la siinayo hadiyad muujiyaan noo naxariisan. Waxa ay noqon doontaa mid yaab leh si ay u awoodaan inay wax badan ka qaban.
Haddii aad ka caawin kartaa, iyadoo hadiyad hal mar ah – fadlan: deeqdo halkan